Maqaallada Chris Rothstein ee Martech Zone |
Maqaallada by Chris Rothstein
Chris Rothstein waa agaasimaha guud iyo aasaasaha Groove.co, Madal kaqeybgalka iibka. Kahor Groove.co, Chris wuxuu dhisay, cabiray oo maareeyay kooxaha iibka shirkadaha ee Google. Wuxuu hadda ka caawiyaa keenista tikniyoolajiyadda casriga ah adduunka iibka sidaa darteed qof kasta oo ka imanaya iibka ilaa agaasimayaasha iibka wuxuu waqti badan ku qaadan karaa bixinta qiimaha macaamiishooda iyo shirkadooda.
Arbacada, February 7, 2018 Arbacada, February 7, 2018 Chris Rothstein
Marka ay timaado iibinta barnaamijka SaaS, beegsashada shakhsiyaadka ma ahan tusaale wax ku ool ah. Si kastaba ha noqotee, celcelis ahaan 5.4 qof ayaa ku lug leh hal go'aan iibinta hal shirkad. Marka la eego in kala-shaandheynta ku saleysan kooxdu ay tahay mid caadi ah, iibka ku saleysan xisaabta (ABS) ayaa ka wax soo saar badan marka loo eego bartilmaameedyada gaarka ah. Habka ku saleysan xisaabta ee iibinta, si kastaba ha noqotee, wuxuu qaadan karaa waqti badan. La socoshada qaddiyadaha qotada dheer iyo jadwalka bartilmaameedyada kala duwan, iyo sidoo kale iskaashiga macluumaadkaas kooxaha gudaha,